Wararkii ugu dambeeyay Qarax ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ugu yaraan 11 Ruux ayaa ku dhimatay, 16 kalena waa ay ku dhaawacmeen, kadib markii qarax loo adeegsaday gaari uu ka dhacay Maqaad ku taalla meel u dhow Hotelka Wehliye ee Wadada Maka Almukarama ee Magaalada Muqdisho.
Gaariga ayaa la dhigay banaanka hore ee Maqaayada oo lagu magacaabo filsan sida dad goobjoogayaal ah ay sheegeen,waxana xilliga qaraxa uu dhacayey maqaayada ku jiray dad badan oo qaarkood ka cunteynayay,kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday.
Gawaarida gurmadka deg dega ah ayaa goobta uu qaraxa ka dhacay gaaray,kuwaas oo gurmad u sameeyey dadka ku waxyeeloobay qaraxaas.
Laamaha amniga Soomaaliya weli wax faah faahin ah kaba bixin qaraxaas,waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ay ka hadlaan mas’uuliyiinta tegay goobta uu qaraxa ka dhacay.
At least 11 dead in Somalia suicide explosion
Somalia attack: Death toll rises to 15 people, 17 others injured (VIDEO)